I Zerobabela sy i Zakaria
"Ary ny mpaminany, dia Hagay mpaminany sy Zakaria, zanak'Ido, naminany tamin'ny Jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitry ny Isiraely izay tao aminy. Dia nitsangana Zerobabela, zanak'i Sealtiela, sy Jesoa, zanak'i Jozadaka, ka nanomboka nanao ny tranon' Andriamanitra any Jerosalema indray; ary ireo mpaminanin' Andriamanitra ireo dia teo aminy ka nanampy azy." - Ezra 5:1,2.
Voahodidin'ny zava-tsarotra maro i Zerobabela rehefa nanangana indray ny tranon'i Jehôvah . Tamin'ny taona talohan'izao ireo fahavalo dia "nanao izay hampiraviravy tanana ny Jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao ny trano," "ka nampitsahatra azy an-keriny" - Ezra 4:4,23. Kanefa niditra an-tsehatra hamonjy ireo mpanangana mahatoky Jehôvah , ka miteny amin'i Zerobabela amin'ny alalan'ny mpaminaniny Zakaria Izy ankehitriny manao hoe: "Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny Fanahiko, hoy Jehôvah , Tompon'ny maro. Iza moa hianao, ry tendrombohitra lehibe? Ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela hianao; ary ho entiny mivoaka ny vato hatao tendrony sady hisy fiantsoana hoe: Fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy! " - Zak. 4:6,7.
Nandritra ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra dia nisy tendrombohitra lehiben'ny fahasarotany, izay hita tokoa fa tsy hay hihoarana, nipoitra hatrany nanoloana ireo izay nandroso teo amin'ny lalana nosokafan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra hiseho ny sakana toy izany mba ho fitsapana ny finoana. Rehefa , voahodidina amin'ny lafy rehetra isika, dia io indrindra no fotoana ambonin'ny fotoana rehetra tsy maintsy hitokiantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny herin'ny Fanahiny Masina. Tsy tokony handeha amin'ny herintsika isika, fa amin'ny herin'i Jehôvah Andriamanitr'i Isiraely. Fahadalana ny mitoky amin'olona na ny manao ny nofo ho sandrintsika. Tsy maintsy matoky an'i Jehôvah isika satria ao Aminy no misy ny tanjaka tsy misy fetra. Izy ilay Iray izay nandamina tsara ny lalana teo anoloan'i Zerobabela mpanompony, ho valin'ny teny sy ny asan'ny finoana, dia afaka manala ny sakana rehetra volavolain'i Satana mba hanakanana ny fandroson'ny asany. Amin'ny alalan'ny fahazarana miaritra amim-pinoana, dia afaka ny ho voaisotra ny tendrombohitry ny fahasarotana tsirairay.
Matetika indrindra no ampanaovin'Andriamanitra fanazaran-tena amin'ny alalan'ny fahadisoam-panantenana sy tsy fahombiazana miharihary ireo mpiasany. Ny tanjony amin'izany dia ny hahaizan'izy ireo hifehy ny zava-tsarotra. Mikendry ny hananan'izy ireo faharesen-dahatra hanao ny tsy fahombiazana miharihary ho tonga fahombiazana Izy. - RH, 16 Jan. 1908.